ZFU Yopembedza Chirongwa cheCommand Agriculture
Rimwe sangano rinomirira varimi, reZimbabwe Farmers Union, nemusi weChipiri rakarumbidza chirongwa cheCommand Agriculture, richiti chirongwa ichi chakaita kuti nyika iite goho rakanaka chose mwaka uno, asi rati rino shushikana kuti hapana hurongwa hwekuti chirongwa ichi chichenderera mberi kwenguva yakareba zvakadii.
Mukuru weZFU, VaPaul Zakaria, vakaudza maseneta ari mukomiti yezviga zveUnited Nations zvakangangana nenyaya dzebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals, kuti varimi vakawanda munyika vainge vaderedza mabasa ekurima nekuda kwekushaya mbeu nefotireza uye chirongwa ichi chakabatsira zvikuru nekuvapa zvikwanisiro izvi.
Vati nekuda kwaizvozvo, nyika yakawana goho rakanaka zvikuru zvisati zvambotika kwemakore.
VaZakaria vati nyika yakawana goho rino kwana vanhu vese nezvipfuyo pachitosara muraudziro.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti vese vari kutengesa chibage chavo kuGrain Marketing Board vari kubhadharwa nenguva.
VaZacharia vataura mashoko aya kunyangwe hazvo vamwe varimi kuMashonaland West vari kuti GMB iri kuramba kutambira chibage chavo vachiti hachina kuoma zvakanaka.
VaZakaria vati chirongwa cheCommand Agriculture icho chinotsigira kurimwa kwechibage zvakanyanya chinofanira kutsigirawo kurimwa kwezvirimwa zvakaita sezviyo, mhunga nemapfunde zvikurusei munzvimbo dzakaoma dzakaita seMasvingo neMatabeleland South.
Asi kunyange hazvo varumbidza chirongwa cheCommand Agriculture, VaZakaria vati vano shushikana nekuti hapana anoziva kuti hurumende icharamba ichitsigira chirongwa ichi kusvika rini.
Uyewo vati chinodiwa kuti mabasa ekurima asimukire munyika kupa varimi mukana wekuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga vachitsigira mabasa avo.
Vati pari zvino magwaro ari kupihwa vanhu nehurumende, ema99 year Leases haasi kutambirwa sechibatiso nemabhanga izvi zvinoita kuti varimi vatadze kusimudzira mabasa avo.
VaZakaria vange vakokwa nemasenta kuti vazotsanagura kuti nyaya yechikafu yakamira sei munyika uyewo vari kuita sei kuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana.
Gore rega rega Zimbabwe inoda matani miriyoni nemazana mashanu kuti vanhu vese vawane chikafu asi gore rino nyika ichawana mamiriyioni maviri nemazana mana ezviuru ematani echibage.
Hurumende iyo yaishandisa mazana matatu emamiroyoni emadhora kutenga chibage kubva kunze yakaparura chirongwa cheCommanda Agriculture senzira yekupedza nzara munyika pamwe nekuchentedza mari yekunze yaishandiswa kutenga chibage kubva kune dzimwe nyika.
Hurumende yakashandisa mazana mashanu emamiriyoni emadhora kutsigira chirongwa ichi mwaka uno uyewo vanhu vese vakabatsirwa nembeu, fotireza nemishonga vanotarisirwa kudzorera mari.
Chirongwa ichi chiri kutungamirirwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa uye hatina kukwanisa kuvabata kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe kuti hurumende icharamba ichitsigira chirongwa ichi kusvika rini.